Xog: Shirkii la filayay inuu Kenya ka furmo oo fashilmay | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xog: Shirkii la filayay inuu Kenya ka furmo oo fashilmay
Xog: Shirkii la filayay inuu Kenya ka furmo oo fashilmay
Wararka naga soo gaaraya dalka Kenya, ayaa sheegaya inuu fashilmay shir magaalada Nairobi ay ku lahaayeen madaxda maamul goboleedyada, kaasoo ay ay ku doonayeen iney Warbixinno ku siiyaan xubnaha beesha Caalamka.
Sida qorshuhu ahaa waxey eheyd inuu shirka furmo shalay oo Arbaca eheyd, balse waxa uu noqday mid aan qabsoomin, iyadoo aan wali si rasmi ah loo shaacin sababta dhabta ah ee ka danbeysa baaqashadiisa.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo eheyd inuu xarunta Kenya gaaro, ayaa ka degay magaalada Addis-Ababa, halkaas oo uu kula kulmay mas’uuliyiin kala duwan, waxaana beri oo Jimco ah la filayaa inuu dib ugu laabto magaalada Garoowe, si Sabtida uu u furo Shirka Golaha Wakiilada Puntland.
Magaalada Nairobi, waxaa haatan ku wada sugan madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Jubaland, iyadoo Axmed Madoobe mudooyinkan uu halkaasi joogay, halka Xaafna uu duhurniamdii shalay gaaray, labadan madaxweyne ayaa ah kuwa sida aadka ah u daneynaya qabsoomida shirka.
Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo isgauna la hadal hayay inuu shirka ka qeybgalayo ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Beledweyn, halkaas oo ay ka taagantahay xiisad salka ku heysa diidmada Gudoomiyihii Hiiraan Yuusuf Dabageed inuu xilka wareejiyo, iyadoo maalin kahorna magaalada lagu dilay Taliyihii qeybta guud ee Booliska Hiiraan.
Previous articleXiisad wili ka taagan Baledwayne
Next articleDEG DEG: Xaalada Baladweyne oo kacsan, Waare oo ku xayiran duleedka magaalada iyo Dabageed oo dagaal ku dhawaaqay.